Dalxiiska Badweynta Hindiya waxaa ka mid ah Indooniisiya iyo Afrika: Hoggaamiye Seychelles waa ogyahay | Fursadaha maalgashi
Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika • Wararka Socdaalka Dhaqanka • Arimaha Dowlada • Wararka safarka ee Indonesia • Wararka Booqashada Caalamiga ah • Fursadaha maalgashi • Safar Laus • kale • Dad war samaynaya • dib u dhiska safarka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • News Trending
Dalxiiska Badweynta Hindiya waxaa ka mid ah Indooniisiya iyo Afrika: Hoggaamiye Seychelles ayaa og
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Maalgashiga Dalxiiska » Dalxiiska Badweynta Hindiya waxaa ka mid ah Indooniisiya iyo Afrika: Hoggaamiye Seychelles ayaa og
Meelaynta koox Jasiirad Indooniisiya ah oo ku taal Indonesia dalxiis waxaa ka mid ah Afrika.
Indooniisiya waxay jeceshahay khibrada la taliye dalxiis ee gaarka loo leeyahay Alain St. Ange. St. Ange wuxuu ahaa wasiirkii hore ee Dalxiiska Seychelles.
Xeebta Bariga Afrika, Seychelles, Reunion, iyo Mauritius waa gobollada Badweynta Hindiya. Kumanaan jasiiradood oo ku yaal Jasiiradaha Indooniisiya sidoo kale waa gobollo muhiim u ah dalxiiska Badweynta Hindiya
Indooniisiya waxay raadineysaa la-taliyayaal khibrad leh si ay u horumariyaan jasiiradaha dalxiiska. Waxay ka heleen caan dalxiis caan ka mid ah saaxiibkiis Indian Ocean Nation, Seychelles.
Nidaamkan ka baxsan sanduuqa ayaa qayb ka ah dalxiis socda iyo dood dhaqaale oo udhaxeysa ASEAN iyo Midowga Afrika.
Yaa si fiican ugu habboon oo isku xidhi kara dalalkan Badweynta Hindiya ee aad ugu kala duwan dalxiis ahaan marka loo eego Alain St. Ange? Waxaa jira kumanaan jasiirado, kuwo badan oo leh awood aad u weyn oo ku saabsan horumarka dalxiiska, maalgashiga, iyo meeleynta.
Alain St. Ange wuxuu ahaa Wasiirkii hore ee Dalxiiska Seychelles, haddana waa madaxweynaha Golaha Dalxiiska Afrika.
St. Ange waa la taliye khaas ah markii uu ka tegey waaxda dawliga ah wuxuuna qarka u saaran yahay inuu u safro Indooniisiya, si uu ugu hormariyo fursadan horumarinta dalxiiska iyo gaadhitaanka Indonesia, laakiin leh taabasho Afrikaan ah.
St. Ange waxaa la xiriiray horumariye reer Indonesia ah si uu ula tashado hindisaha dhowr jasiiradood oo Indooniisiya ah. Jasiiradahaas waxaa ka mid ah Bangka Belitung, Maratua eco-paradise ee Bariga Kalimantan, Alor iyo jasiiradaha Rote ee Nusa Tenggara Timur iyo jasiiradda Banda ee Maluku.
Indooniisiya waa dalka ugu xubnaha badan ASEAN. Dalxiisku wuxuu hor kacayaa wadada Indooniisiya iyo waliba qaybo badan oo Afrika ah oo loogu diyaar garoobayo dib u furista xuduudaha adduunka.
Indooniisiya weli waa meel caan ah oo loo dalxiis tago, oo bixisa kala duwanaansho dhaqameed, qurux dabiici ah oo qurux badan, iyo hoy heer caalami ah oo qiimo jaban ah
St. Ange ayaa u sheegay eTurboNews: “Waxaa jira waxyaabo ay iska shabahaan Indonesia iyo Afrika. Iskaashiga horumarinta, maalgashiga, wacyigalinta ayaa si weyn uga faa’iideysan kara Badweynta Hindiya iyo Afrika. ”
Haddii loo shaqaaleysiiyo lataliye khaas ah, St. Ange wuxuu qorsheynayaa inuu Indonesia ka caawiyo marinka adag ee dib u dhiska dalxiiska inta lagu jiro faafida adduunka, iyo kadib-COVID-19.
St.Ange ayaa la filayaa inuu u safro Indonesia goor dambe oo bisha Abriil ah.
Kulan lala yeelanayo Wasiirka Dalxiiska Indooniisiya Sandiaga Uno ayaa la qorsheynayaa in lagu qabto magaalada Jakarta. Uno iyo St. Ange waxay dhowaan ku kulmeen shirar heer sare ah oo ku saabsan Zoom Dalxiiska Adduunka Network (WTN). Golaha Dalxiiska Afrika waa iskaashi istiraatiiji ah WTN, Indonesia waxaa lagu casuumay inay ku soo biirto ururka iyo dooda ku saabsan dib u dhiska.rajo WTN waxay ka bilaabatay 127 dal.
Alain St.Ange, Seychelles Wasiirkii hore ee Dalxiiska